PSJTV | धानमा धोका : गरिमा नै हो कि होइन? काठमाडौंमा डीएनए परीक्षण हुँदै
गरिमाको गरिमा हो, छिटो पाक्ने र स्वादिलो हुने। यही ठानेर धान सुपरजोनका किसानले हौसिँदै पुरानो प्रजाति फेरे। ठूलो आशा गरिएको गरिमाले भने अन्त्यमा धोका दियो। यो धान पसाउँदै पसाएन।
धोका खाएपछि कृषि कार्यालय यसको डीएनए परीक्षणमा लागेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छ।
उसको आशंका छ, झुक्किएर बीउ अर्कै पो प¥यो कि? काठमाडौंबाट डीएनए रिपोर्ट आएपछि वास्तविकता खुल्ने सुपरजोनका वरिष्ठ कृषि अधिकृत तपेन्द्रबहादुर शाह बताउँछन्।